စီးပွားဖြစ်လေယာဉ်ပေါ်ပျံ၏တိုးမြှင့်လုပ်ရတဲ့ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ် Chartered မှ ပို. ပို. လူမောင်းသည်. Long ကအကောက်ခွန်လိုင်းများ, ည TSA လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုများ, လူစည်ကားလေဆိပ်, စီးပွားဖြစ်ဂျက်လေယာဉ်ပေါ်ပျံ၏အဆငျမပွမှေု့အချို့. ပုံမှန်အားဖြင့်ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတန်းအစားပျံသန်းသောသူပြည်သူ့ယခု ပို. ပို. ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ် Chartered ၏ဘောဂဗေဒမှာရှာကြသည်. သို့သော်, စီးပွားဖြစ်လေကြောင်းလိုင်းနှင့်အတူမတူဘဲ, တစ်ဂျက် chartering ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုရှာဖွေရန်၎င်း၏မလှယျကူ. ဒီတော့ဒီမှာကျနော်တို့မေးခွန်းကိုဖြေ: ဒါကြောင့်ပဋိညဉ်စာတမ်းမှပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ဘယ်လောက်ကုန်ကျပါဘူး?
တစ်ဂျက် chartering ၏ကုန်ကျစရိတ်ပျံ၏တစ်နာရီကိုဒေါ်လာပေးဖြစ်ပါတယ်. မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း, ကုန်ကျစရိတ်လေယာဉ်၏ကွဲပြားခြားနားသောမော်ဒယ်များအကြားကွဲပြားခြားနားသည်. တချို့ကလေယာဉ်ဇိမ်ခံများမှာ, အခြားသူများကိုကဇိမ်ခံမဟုတ်သော်လည်း. တချို့ကလေယာဉ်တစ်ဒါဇင်ကျော်ခရီးသည်များအတွက်အာကာသရှိသည်, သေးငယ်တဲ့သူတွေကိုသာအဖြစ်အနည်းငယ်လေးအဖြစ်ခရီးသည်ထိုင်ခုံများသော်လည်း.
ဈေးကွက်ထဲမှာအသေးဆုံးပဋိညဉ်စာတမ်းလေယာဉ်တ Cessna ကိုးကား Mustang ဖြစ်ပါသည်, အကြောင်းစီးနင်းနိုင်သည့် 4-5 ခရီးသည်. ဒါဟာအစပဋိညဉ်စာတမ်းမှစျေးအသက်သာဆုံးလေယာဉ်ဖြစ်ဖြစ်ပျက်: သငျသညျအကွောငျးကိုအဘို့ပဋိညဉ်စာတမ်းတစ် Cessna ကိုးကား Mustang နိုင် $1700 ပျံ၏တစ်နာရီလျှင်.
အကိုးကား Mustang အ Learjet သည်ထက်အတန်ငယ်ပိုကြီး 60, တက်စီးနင်းနိုင်သည့် 8 ခရီးသည်. Wichita အတွက် Bombardier လေကြောင်းဖွငျ့, Kansas ပြည်နယ်ကအကြောင်းသင်ကုန်ကျမည်ဟု $3400 ပဋိညဉ်စာတမ်းမှ Learjet ပျံသန်းတစ်နာရီလျှင် 60.
မြင့်မားအဆုံးမှာ Gulfstream တူသောလေယာဉ်သည် 550, သောအကြောင်းကုန်ကျ $8600 ပျံသန်းအချိန်ရဲ့တစ်နာရီကို. ဒါဟာအကြောင်းစီးနင်းနိုင်မယ့် bit နဲ့ကူညီပေးသည် 14-19 ခရီးသည်.